« Lentilles » atao foto-tsakafo : Sady mahasalama no mampihena
Tandremo, misy tsy mahazaka ny “gommage”
Ny fahalalan'ny besinimaro ny « gommage » dia hoe manala « peau morte » na ireo hoditra maty mandoto sy mahaela ny fipoitran’ny hoditra vaovao. Fa tena ilaina ve ny manao gommage ? Misy mantsy ireo tsy mba manao izany nefa toa tsy maninona akory. Inona avy ireo antony tena tsy maintsy hanaovana azy io ?
Mikolo hoditra makiana lava
Karazana sokajin-koditra mora mikentrona ireo tsy ampy rano (deshydraté) na koa tsy ampy menaka (sèche).
Mikolo ny tanana mandritra ny ririnina
Raha vao ratsy karakara ny tanana, mandritra ny fotoana mampangatsiaka ny andro, dia rotiky fanala ny hoditra eo aminy.
« Lait de coco » : Manalava ny volo vetivety
Raha ahosotra matetika amin’ny foto-bolo ny « lait de coco » dia manafaingana ny fanirin’ny volo.
Didy 10 mampateza ny « vernis »
Rehefa manosotra « vernis », dia satry haharitra faran’izay ela eo amin’ny hoho izy ireny. Raha tsy « permanent » no anaovana, dia roa na telo andro izany dia efa manomboka miendaka.
Rehefa manosotra « vernis », dia satry haharitra faran’izay ela eo amin’ny hoho izy ireny. Raha tsy « permanent » no anaovana, dia roa na telo andro izany dia efa manomboka miendaka. Na izany aza dia misy kosa ny fitspika azo arahina, raha tiana hateza eo amin’ny hohonny “vernis”. Ampiharo ange ireto e !
Manimba tarehy ve raha miovaova « produits » ?
Azo atao ve ny manovanova ny akora ampiasaina amin’ny tarehy ? Manimba tarehy ve ny fihetsika tahaka izany sa mampifameno ireo akora isan-karazany ? … Maro amin’ny vehivavy no mifanontany mahakasika izany. Indro àry ny fanazavan’ny matihanina rehefa nanontanianay izany …
Voka-pikarohana iray avy any Canada, no namoaka fa tsara kokoa raha soloina « lentilles » ny vary fotsy sy ny ovy, indrindra ho an’ireo olona voan’ny diabeta na ahiana ho voan’izany. Fantatra fa tsy mampivondraka ity haninkotrana ity, no sady mahasalama tsara ihany koa.
Be fibra ny « lentilles » ka manatsara ny fiasan’ny tsinay sy ny vavony ary misoroka ny mitohana. Feno proteina rahateo izy ity ka misoroka ny aretin’ny fo sy ny lalan-drà. Be Fer sy maneziôma koa ao anatiny ka manampy hiady amin’ny rarin-tsaina sy ny havizanana koa izy. Mampitony sady mahamiran-tsaina koa ity voamaina ity satria be “cuivre”, faosforo, zinc, manganeza ary vitamina B. Araka ny navoakan’ny Oniversiten’i Guelpho any Canada dia mihena hatrany amin’ny 20% ny tahan’ny siramamy ao anatin’ny rà raha soloina “lentilles” ny vary na ovy anjara 1.
Natao andrana tamin’olona 24
Tera-tany kanadianina miisa 24 no nanaovana andrana tamin’ity fikarohana ity. Nozaraina 4 izy ireo ka samy natao samihafa ny foto-tsakafon’izy ireo. Ny vondrona voalohany nihinana vary fotsy. Ny vondrona faharoa dia nihinana vary sy “lentilles”. Ny vondrona fahatelo nihinana vary sy karazana « lentilles corail ». Ny vondrona farany nihinam-bary fotsy antsasak’anjara sy “lentilles” tsotra. Naverina ihany koa ity andrana ity ka ovy indray no nanaovana azy fa tsy vary intsony. Notsapaina ny tahan-tsiramamin’ireo olona nanaovana andrana ireo, ora roa mialoha ny hisakafo sy ora roa tao aorian’ny nihinanana. Hita taorian’izay fa na dia ny antsasaky ny anjara vary fotsiny aza no soloina “lentilles” dia mihena be ny tahan’ny siramamy ao anatin’ny rà.
Noho izy manana taha ambany amin’ny “glycémie” dia tsy mampakatra ny tahan’ny siramamy ao anatin’ny rà mihitsy ny “lentilles”. Mety tsara ho an’ny fahasalamana sady tsy mampatavy mihitsy ny fihinanana “lentilles” matetika noho izany. Atoron’ity fanadihadiana ity mihitsy aza ny hanaovana ny “lentilles” ho foto-tsakafo.